Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta mmanụ na-emepụta mmanụ na China |Shengte
ngbanwe nke mmanụ
The "S11" 35KV ike transformer bụ ihe dị mkpa akụrụngwa na ike nnyefe na mgbanwe usoro na obere ọnwụ.A na-eji ya eme ihe na ọdụ ụgbọ mmiri na ọkụ ọkụ, wdg.
Nka na ụzụ paramita nke 10KvS11 usoro abụọ winding na-abụghị excitation voltaji na-achịkwa ike transformer
Nlereanya Akara ikike (KVA) Ogo nchikota voltaji Nọmba otu njikọ Ọnwụ enweghị ibu (w) Mfufu 75C(W) Enweghị ibu ugbu a (%) Ihe mgbochi sekit dị mkpụmkpụ (%)
Voltaji dị elu (KV) Oke ọpịpị voltaji dị elu (%) Obere voltaji (KV)
S11-100/35 100 0.23 2.01 / 1.91 1.1
S11-500/35 500 38.5 ± 2 × 2.5% Dyn11 0.68 6.91 / 6.58 0.85
S11-2000/35 2000 1.99 19.7 0,55
S11-2500/35 2500 2.36 23.2 0,55
Nọmba usoro iji mata ọdịiche
Enwere ike kewaa ya ka ọ bụrụ ihe ngbanwe nke ụzọ atọ na otu ngbanwe.N'ime usoro ike nke atọ, ngwa n'ozuzu nke ihe ngbanwe nke atọ, mgbe ikike dị oke ibu ma gbochie ọnọdụ ụgbọ njem, na usoro ike nke atọ nwere ike itinye n'ọrụ na otu atọ na-emepụta ihe na-agbanwe agbanwe.
Ikuku ịmata ọdịiche
Enwere ike kewaa ya ka ọ bụrụ ihe ntụgharị ikuku okpukpu abụọ na igwe ntụgharị ikuku atọ.Ọtụtụ mgbe, ndị na-agbanwe agbanwe bụ ndị na-atụgharị okpukpu abụọ, ya bụ, enwere ikuku abụọ na isi ígwè, otu bụ ikuku mbụ, otu bụ nke abụọ.Ndị na-agbanwe agbanwe bụ ndị nwere nnukwu ikike ngbanwe (n'elu 5600 kVA) ejiri jikọọ ahịrị nnyefe voltaji atọ dị iche iche.N'ọnọdụ pụrụ iche, e nwekwara Satons transformers na-etinyekwu windings.
Enwere ike kewaa ya ka ọ bụrụ ihe ngbanwe ígwè-isi na ihe ngbanwe ígwè-shell.Ọ bụrụ na ngwugwu winding na mpụta isi bụ ihe ntụgharị ụdị isi;Ọ bụrụ na a na-ekechi isi ígwè ahụ n'akụkụ akụkụ ikuku, ọ bụ ihe ngbanwe nke ígwè.Ha abụọ dịtụ iche na nhazi, mana ọ nweghị ọdịiche dị mkpa na ụkpụrụ.Ndị ntụgharị ọkụ bụ ụdị isi.
Ihe ngbanwe a bụ isi igwe, winding, tank mmanụ, ohiri isi mmanụ, mkpuchi mkpuchi, mgbanaka mgbanaka na gas relay.
The iron isi bụ magnetik sekit akụkụ nke a transformer.Hysteresis ọnwụ na eddy ugbu ọnwụ na-eme n'oge ọrụ.In iji belata okpomọkụ ọnwụ na olu na arọ, isi bụ nke oyi na-atụ Rolled ọka gbakwasara silicon ígwè mpempe akwụkwọ na elu magnetik. conductivity na-erughị 0.35mm. Dị ka ndokwa nke winding na isi, e nwere isi ụdị na shei ụdị.
Na transformer nke nnukwu ikike, iji mee ka okpomọkụ na-emepụta site na mfu nke isi ígwè nwere ike wepụ ya kpamkpam site na mmanụ mkpuchi mkpuchi n'oge okirikiri, ka e wee nweta mmetụta dị mma nke ọma, a na-enyekarị ọwa mmanụ jụrụ oyi. isi ígwè.
The winding na iron isi bụ isi akụkụ nke transformer.N'ihi na enwere nguzogide na winding n'onwe ya ma ọ bụ kọntaktị kọntaktị na nkwonkwo, okpomọkụ kwesịrị ịmepụta site na iwu Joule. Ya mere, ikuku enweghị ike ịgafe ugbu a dị elu karịa nke a kwadoro ogologo oge.Tụkwasị na nke ahụ, ikuku nke dị mkpirikpi ga-emepụta nnukwu ike electromagnetic na windings ma mebie transformer. Ntugharị ya bụ isi nwere ụdị concentric na nkpuchi ụdị abụọ.
Ihe kachasị njọ nke windings transformer bụ obere sekit n'etiti ntụgharị na obere sekit na shell.Interturn mkpirisi sekit bụ tumadi n'ihi ikpuchi ịka nká, ma ọ bụ n'ihi na transformer bufee na site na mkpụmkpụ sekit mkpuchi site n'ibu mmebi.The mmanụ elu na transformer tụlee, nke mere na winding na-ekpughere mmanụ elu, interturn short circuit nwekwara ike ime; Tụkwasị na nke a, mgbe ị na-agafe obere sekit, n'ihi na n'elu-ugbu a mmetụta nke winding deformation, nke mere na mkpuchi bụ mmebi n'ibu, ga-emepụtakwa inter-turn short circuit.N'ihe gbasara interturn short circuit, nke dị ugbu a na obere ikuku nke ikuku nwere ike karịa uru a kwadoro, ma ugbu a na ikuku dum nwere ike ọ gaghị agafe uru.N'okwu a, ọrụ nchebe gas, ọnọdụ dị oké njọ, ngwaọrụ nchebe dị iche iche ga-arụkwa ọrụ. Ihe kpatara obere sekit nke shei ahụ bụkwa n'ihi ịka nká mkpuchi ma ọ bụ mmiri mmiri mmanụ, ọkwa mmanụ na-adaba, ma ọ bụ n'ihi àmụmà na. overvoltage na-arụ ọrụ.Tụkwasị na nke ahụ, mgbe ị na-agafe na sekit dị mkpirikpi na-eme, a ga-eme ka ikuku ahụ gbanwee n'ihi na ọ na-adị ugbu a, ihe mgbagwoju anya dị mkpirikpi ga-emekwa na shei ahụ.Mgbe shei ahụ dị mkpụmkpụ, ọ bụ n'ozuzu ọrụ nke ngwaọrụ nchebe gas na ihe nchebe ala.
A na-etinye ahụ ahụ (winding na iron core) nke ihe ngbanwe mmanụ na-etinye n'ime tank mmanụ nke jupụtara na mmanụ transformer, na tank mmanụ na-agbakọta ya na efere ígwè.Mmanụ mmanụ nke ọkara na obere mgbanwe bụ nke igbe igbe na mkpuchi igbe.A na-etinye ahụ nke ngbanwe na igbe igbe.Enwere ike imeghe mkpuchi igbe ka ebuli ya n'ahụ maka mmezi.
Atụmatụ arụmọrụ maka edezi okwu
A. Na mgbakwunye na ọla kọpa waya maka obere ikike, na ala-voltaji winding nke mmanụ-mikpuru transformer n'ozuzu adopts cylinder Ọdịdị nke ọla kọpa foil gburugburu aro;Igwe ikuku voltaji dị elu na-agbaso usoro cylinder multi-layer, nke mere na nkesa nke ntụgharị ampere na-edozi, nkwụsị nke magnet dị ntakịrị, ike ígwè ọrụ dị elu, na nkwụsị nke mkpụmkpụ dị ike.
B. A na-anabata usoro nchikota maka isi na ikuku n'otu n'otu.Ngwakọta akụkụ dị ka ịdị elu nke ngwaọrụ na obere voltaji ụzọ waya na-na-na-onwe-mkpọchi mgbochi loosening akụ, na Ọdịdị na-enweghị ebuli isi na-nakweere iguzogide ujo nke njem.
C. Coil na isi na-eji agụụ ihicha, mmanụ transformer na-eji vacuum oil filter na usoro injection mmanụ, nke mere na ihe ngbanwe dị n'ime ime ka ọ dịkarịa ala.
D. Mmanụ mmanụ na-anabata mpempe akwụkwọ corrugated, nke nwere ọrụ iku ume iji kwụọ ụgwọ mgbanwe olu nke mmanụ na-eme site na mgbanwe okpomọkụ, n'ihi ya, ngwaahịa ahụ enweghị tank nchekwa mmanụ, nke doro anya na-ebelata ịdị elu nke ihe ntụgharị.
E. N'ihi na mpempe akwụkwọ corrugated dochie tank nchekwa mmanụ, mmanụ ihe ntụgharị dịpụrụ adịpụ site n'èzí ụwa, iji gbochie ịbanye oxygen na mmiri nke ọma ma na-eduga ná nkwụsị nke ọrụ mkpuchi.
F. Dị ka isi ihe ise a dị n'elu si kwuo, mmanụ ọkụ na-ekpu mmanụ adịghị mkpa ịgbanwe mmanụ na ọrụ nkịtị, nke na-ebelata ụgwọ ọrụ nke transformer nke ukwuu ma na-agbatị ndụ ọrụ nke transformer.
Nke gara aga: Ụlọ ọrụ ODM 10KV/11KV klaasị S11/S13 usoro ihe ngbanwe mmanụ na-emikpu n'ụzọ zuru oke ngbanwe ike ntụgharị-shengte
Osote: Ọnụ kacha mma maka SG(B) 10 Series Distribution Transformers N'ogbe-Shengte
S11-M-2500/10 Atọ na-adọ n'ụzọ zuru ezu anọkwasị mmanụ imme ...
transformer ụdị mmanụ
S11-M-2000/10 n'ụzọ zuru ezu akara mmanụ-mikpuru ike ...